बिज्ञान / प्रविधि – Page3– Online Bichar
के हो हस्तमैथुन ? किन धेरैले हस्तमैथुन गर्छन् ?
युवायुवतीहरूले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक चरम यौन आनन्द लिने माध्यम नै हस्तमैथुन हो भन्दा फरक पर्दैन । हस्तमैथुन यति नै पटक गर्न मिल्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित मापन छैन । युवायुतीहरूले राख्ने यौन जिज्ञासालाई विश्लेषण गर्दा हस्तमैथुन र यससँग सम्बन्धित खुल्दुली एक नम्बरमा पर्न आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जननेन्द्रिय चलाई यौन आनन्द लिने क्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ । संस्कृत भाषामा हस्तको अर्थ हात र मैथुनको अर्थ यौनकार्य भन्ने बुझिन्छ । केटाहरूले चाँडै र सजिलै सिक्ने भएकाले नेपालमा किशोरहरूले बढी…
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भन्नाले उस्तै लिंगका दुई व्यक्तिबीच स्थापित यौनसम्बन्ध हो । यो कुनै रोग होइन । यसलाई सन् १९७५ मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकार गरेर घोषणा गरिसकेको छ । समलिंगी यौनसम्बन्ध एउटा प्रवृत्ति हो, जुन अल्पसंख्यक व्यक्तिमा हुन्छ । यो जिनको प्रभावबाट हुन्छ भन्ने तथ्य पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका छन् । सामान्यतया समलिंगी यौनसम्बन्ध दुई किसिमका हुन्छन्– मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात् र व्यावहारिक वा पछि सिकेर । मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात समलिंगीहरू शारीरिक रूपमा पुरुष वा स्त्रीजस्ता देखिए पनि भावनात्मक वा…
बढी आनन्ददायी यौन क्रियाकलापको उमेर कुन होला ?
उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ ? महिलाहरुको हकमा २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्स सबैभन्दा आनन्ददायक हुने निश्कर्ष निकालेको छ । यसैगरि पुरुषको हकमा भने सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा वा आनन्द लिने उमेर ३३ वर्ष रहेको बताइएको छ । उमेर सँगै यौन क्रियाकलापमा अर्थात रोमान्चकता र आनन्ददायक अनुभवमा असर पर्ने हुन्छ । उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ भन्ने कौतुहल हुनु स्वभाविक नै हो । एक…
ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा पहिलो पटक गरिएको प्याराग्लाइडिंगको परीक्षण उडान सफल भएको छ । बिग स्माइल प्याराग्लाइडिंग नेपाल पोखराका सिनियर पाइलट सागर क्षेत्रीले परीक्षण उडान गर्नुभएको हो । जिल्लाको देउराली डाँडाबाट उडान गरेर रुम्जाटार परिसरमा अवतरण गरिएको थियो । परीक्षण उडानमा पाइलट क्षेत्रीसंगै स्थानीयबासी जिन्दल श्रेष्ठ पनि उडानमा सहभागी थिए । यहाँको मौसम र हावाको बेग प्याराग्लाइडिंगका लागी सुहाउँदो भएको भन्दै क्षेत्रीले आगामी दिनमा प्याराग्लाइडिंगको माध्यमबाट पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार भने तयार गर्नुपर्ने बताए । क्षेत्रीसँगै उडान गरेका स्थानीय…
नेपालका कतिपय लोकप्रिय कलाकारले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन् भने कतिपय नायिकाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका छन् । अन्तर्जातीय र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने धेरैजसो नायिकाले प्रेमविवाह गरेका हुन् । नेपालमा बनेको पहिलो रंगीन चलचित्र कुमारीकी नायिका चैत्य देवी सिंह, नायिका सारंगा श्रेष्ठ, मनको बाँधकी नायिका सुष्मा शाही, नायिका मीना सिंह, नायिका बिपना थापा, पूर्व मिस नेपाल एवं नायिका झरना बज्राचार्य, प्रेमपिण्डकी नायिका सनी रौनियार आदिले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका छन् । अन्तर्जातीय विवाह गर्ने धेरैजसो कलाकारले कलाकारितासँग सम्बन्धित कलाकर्मीहरूसँग नै…
एउटा फिल्मबाट कति कमाउँछन् बलिउड अभिनेता ?
फ्यानहरूलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो, अभिनेताहरू फिल्म खेलेबापत कति पारिश्रमिक लिन्छन् ? लिउड अभिनेताका फ्यान नेपालमा पनि उत्तिकै छन् । अमिताभ बच्चनदेखि सलमान, शाहरुख र आमिर खान अनि रणवीर कपुर र ऋतिक रोशनलगायत चर्चित अभिनेताले फिल्मबाट लिने पारिश्रमिक कम छैन । आखिर कसले कति लिन्छन् ? आमिर खान आमिर खानले चाहे भने बलिउडमा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन सक्छन् । तर, उनी पारिश्रमिकभन्दा फिल्मको मुनाफाबाट बढी कमाउँछन् । फिल्म बनाउँदा उनी प्रायः ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा लिन्छन् । ‘दंगल’…
चलचित्र बिकाश बोर्डमा निकिता
काठमाडौं – चलचित्रकर्मी निकिता पौडेल ‘चलचित्र बिकाश बोर्ड’को अध्यमा नियुक्त भएकी छन् । मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको वैठकले निकितालाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । एनएफडीसीकी प्रमुख समेत रहेकी निकिताको नाम केही समय अगाडि देखि बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि चर्चामा थियो । गत जेठ महिनाबाट राजकुमार राइको २ बर्षे कार्यकाल सकिएपछि बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त रहँदै आएको थियो । पर्व चलचित्रको निर्माता समेत रहेकी निकिता गोपीकृष्ण हलका संचालक उद्धब पौडेलकी छोरी हुन् । उद्धब पौडेल राप्रपाका नेता हुन् ।…
ढुंगेलको पहिलो म्युजिक भिडियो रिलीज भएको ७ दिनमैै हिट
झापा, २५ मंसिर । झापाली ठिटो सन्तोष ढुंगेलको मूख्य भूमिकामा गायक श्रीकृष्ण लुईटेल बेकेदारीको उता राम विदेश लागे यता सीता रावणसँग बुलेटमा सरर भन्ने गित युटुबमा रिलिजभएको ७ दिनमै सुपरहिट भएको छ । रिलिज भएको ७ दिनमानै युटुबमा ३ लाख धेरैले हेरि सकेका छन् । यस भिडियोमा झापा बुद्धशान्ति ६ का सन्तोष ढुंगेलले पहिलो पटक बोकेदारीको गित मार्फत अभिनयमा डेब्यू गरेका छन् । अभिनय क्षेत्रमा यो आफ्नो पहिलो अनुभव भएको बताएका ढुंगेलले पहिलो पटकको भिडियो नै यस्तो सुपरहिट भएकोमा खुशी…
किन सेलायो फिल्म क्षेत्र
काठमाडौं ÷ हलमा नयाँ नेपाली फिल्म कुरेका दर्शक निराश भएको दुई हप्ता भइसकेको छ। मंसिर १ गते निशा अधिकारीले निर्माण गरेको फिल्म ’झ्यानाकुटी’ रिलिज भयो। त्यसपश्चात कुनै नाम सुनिएका फिल्म हलमा छैनन्। आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गर्न हानथाप गर्ने निर्माता निर्देशकहरू यो महिना भने चुप बसेका छन्। किन रिलिज भएनन् फिल्म? देश अहिले चुनावमय बनिरहेको छ। चुनावको प्रत्यक्ष प्रभाव फिल्म प्रदर्शनमा पनि देखिन्छ। वितरक तथा निर्हमाताहरू यस महिना फिल्म रिलिज नहुनुको कारण भनेको चुनाव नै भएको बताउँछन्। वितरक गोपालकाजी कायस्थ…